Barak Obama Walaashis oo Hargeysa Ku Sugan Arin U tagtay - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalBarak Obama Walaashis oo Hargeysa Ku Sugan Arin U tagtay
Barak Obama Walaashis oo Hargeysa Ku Sugan Arin U tagtay
July 22, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland 1
Gabadh ay walaalo yihiin Madaxweynihii hore ee Maraykanka Mr. Barak Obama oo lagu magacaabo Dr. Auma Obama, isla markaana ah qoraa, saxafiyad iyo shakhsiyad caan ah oo u dhalatay dalka Kenya ayaa maalmahan ku sugan caasimada Somaliland ee magaalada Hargeysa.
Dr. Auma Obama ayaa waxay kamid aheyd martidii sanadkan lagu casuumay Bandhiga carwada buugaagta Hargeysa oo ay sanadkiiba hal mar ay qabato xarunta dhaqanka ee Hargeysa.
Socdaalka ay Dr. Auma Obama ku timid caasimada Hargeysa ayaa noqonaya socdaalkeedii ugu horeeyay ee ay ku timaado Somaliland, iyadoona martiqaad rasmiya ka heshay Xarunta dhaqanka ee Hargeysa.
Dr. Auma oo shalay khudbad ka jeedisay madasha furitaanka carwada Buugaagta Hargeysa ayaa ka hadashay dib u dhaca balaadhan ee ka jira qaarada Afrika, isla markaana ka dhawaaji madax-banaanida Somaliland, waxayna tiri
“Waa in ay beddelno fekerka ah inaynu ku noolaano deeq la inna siiyo iyo cid inna hormarisa, waayo cidina bilaash kuu horumarinayso. Fiqiirnimada aan ku noolnahay waa inaynu aqbalnaa oo aynu dedaalkeenna kaga baxnaa, oo aanayu ku xisaabtamin cid innaga saarta”.
“Kuwa ka imanaya China, Europe ama America wax aan u arkaa kuwa u yimi qaaraddeena in ay ka arkaan fursado uga bannaanada dadkooda, shirkadohooda amase arrimahooda gudaha ee siyaasadeed ama degganaansho. Waxa ay u hanqaltaagayaanaa macdanteenna, midheheenna, xooggeena, taasina waxba kagama duwana sidii xilligii gumaysiga”.
Waxayna intaas kusii dartay “Afrika waxa loola dhaqmaa oo adduunku u arkaa sidii ay tahay waddan kaliya. Waa in aynu taa ka dhiidhinaa oo u sheegnaa in Afrika aanay ahayn dal ee ay tahay qaarad, waa inay arkaan, maqlaan oo fahmaan in markaan ku daro Somaliland oo madax-bannaan, ay ka kooban tahay 55 dal oo mid kastaa leeyahay dhaqankiisa, ahaanshihiisa iyo dabeecadihiisa u gaarka ah”.
Hambalyo marqaanews halkaa kasii wad soo gudbinta wararka fcn iyo
xaqiiqda meesha taal kolay qaar
aan ogtahay dhigkar baa ku dhici
doona matkay daalacdaane.